NgoLwesine, Novemba 17, 2011 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
LinkedIn Unamalungu angaphezu kwezigidi ezili-135 kumazwe aphesheya kwaye umvuzo ophakathi womsebenzisi we-LinkedIn ungaphezulu kwe- $ 100,000 ngonyaka! Into yokuqala endiyibuyayo kuhambo lweshishini okanye intlanganiso kukufaka bonke abafowunelwa kum kwi-LinkedIn, ndiphonononge iiprofayili zabo, kwaye ndibone ukuba zeziphi endimele ndizilandele. Ngapha koko, andamkeli kwaqala kwakhona… ukuba awunayo iprofayile ebanzi ye-LinkedIn, sisimangalo sokuqala esichasene nawe.
I-LinkedIn lihashe elimnyama eliyintsumpa kumajelo asekuhlaleni. Sonke siyazi ukuba ikho, kodwa bambalwa abayisebenzisa ngokupheleleyo. Le mpazamo enkulu, ngakumbi xa kufikwa kwintengiso yeshishini lakho. Olu qeqesho lwenkampu yoqeqesho olusisiseko lwe-boot luya kukunika izixhobo eziyimfuneko ekusebenziseni indawo kuyo yonke ishishini lakho kunye neemfuno zakho zorhwebo. Isuka e Ingqondo imbonakalo.
Ekuphela kwezinto ezimbi endinazo malunga ne-LinkedIn kukuba umgangatho wamaqela uye wehla kakhulu ngokugaxekile kwaye wenza imali ngokukhawuleza kwi-gurus. Kananjalo, asibonanga nakuphi na ukubambelela kwintengiso ye-LinkedIn. Kubonakala ngathi yindawo yokuma kwindawo enye kubantu bezoshishino. Bangena ngaphakathi, bafumana oko bakufunayo, baphume. Ngokwenyani kubonakala ngathi akukho nto inyanzelisa ukugcina iindwendwe apho.
tags: Unxibelelwano lweshishiniLinkedIninethiwekhi edibeneyosetup ikhonkco
Ixabiso kunye ne-ROI evela kwiiNkomfa